Tag: midab | Martech Zone
Celcelis ahaan macaamilku wuxuu la kulmaa mug weyn oo xayaysiis ah 24-kii saacba. Waxaan ka soo gudubnay celcelis ahaan dadka waaweyn ee loo soo bandhigey 500 xayeysiis maalintii 1970-yadii illaa ugu badnaan 5,000 oo xayeysiis maalintii ah Taasi waa qiyaastii 2 milyan oo xayeysiis sanadkii ah oo qofka celcelis ahaan uu arko! Tan waxaa ka mid ah raadiyaha, telefishanka, raadinta, warbaahinta bulshada, iyo xayeysiisyada daabacan. Xaqiiqdii, 5.3 tirilyan oo xayeysiis ah ayaa lagu muujiyaa internetka sanad walba Tan iyo markii aan soo shaac baxnay
Wax yar baan yara guntay markii aan helay sawirradan sababtoo ah, sida muuqata, waa inaan noqdaa naqshad qaabdhismeedka noob. Laakiin, hoog, waa wax la yaab leh ogaanshaha inta aanan ka aqoon warshad aan si qoto dheer ugu dhex jiray 25-kii sano ee la soo dhaafay. Difaacayaga, kaliya waan xashaashaa oo waxaan codsadaa sawirada. Nasiib wanaag, nashqadeeyayaasheena ayaa aad uga aqoon badan xagga naqshadeynta garaafka aniga. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato farqiga u dhexeeya